Ny fampisehoana lehibe indrindra nandritra ny vanim-potoana volamena farany an'ny Anime! - Hafa
Ny fampisehoana lehibe indrindra nandritra ny vanim-potoana volamena farany Anime!
Ny vanim-potoana volamena anime dia fotoana izay tonga lafatra ny zava-drehetra.
Vola bebe kokoa no naparitaka tao amin'ny indostria tsy misy piraty manelingelina. Ary ny kalitaon'ny seho anime dia avo lenta foana.
Tsy midika akory izany fa ny anime amin'ny taona 2020 dia ao anaty antontam-alika, saingy midika izany fa nisy anime 'kalitao' kalitao tamin'ny fotoana nomena nandritra ny vanim-potoana volamena. Ao amin'ny ambony indrindra haavo.
Ny vanim-potoana volamena dia nanomboka tamin'ny taona 90 ary nifarana tamin'ny fiandohan'ny taona 2000.
Shounen dia iray amin'ireo mpitarika miharihary, miaraka amin'ireo karazana toa:
ary ny sasany vitsivitsy.
Betsaka tamin'ireto anime ireto no lasa:
Angano ambanin'ny tany
Ireo no anime lehibe indrindra tamin'izany fotoana izany.
1. Alchemist fenometaly
Fullmetal Alchemist dia safidy mazava ho azy mandritra ny vanim-potoana volamena farany. Adala ihany no hilaza fa tsy izy no iray amin'ireo anime lehibe indrindra hitantsika navoaka.
Angamba ampahany amin'io antony io dia noho ny studio ao ambadik'izany. Studio Bones fantatra amin'ny My Hero Academia, Eureka Seven, ary anime be dia be.
Ny tena mahagaga kokoa amin'ny FMA dia ny TSY manana vanim-potoana IRAY (tsy miraharaha ny firahalahiana). Ary mbola nandrava tanteraka ny fifaninanana tamin'ny vanim-potoana volamena io.
Mifandraika: 30 amin'ireo teny nalaina tamin'ny alkimiana feno
2. Fanamarihana momba ny fahafatesana
Death Note dia iray amin'ireo anime malaza manelingelina izay tsy azonao ialana. Io no antony nanalavirako azy an-taonany maro satria narary mandre momba an'io aho.
Saingy tsy afaka mandainga aho - raha vao nijery ilay sarimiaina aho dia nahatakatra ny hafetsena. Na tianao ny anime na tsia, io no iray amin'ireo vanim-potoana volamena lehibe indrindra.
Madhouse Studios dia fantatra amin'ny famoronana:
Ary ny karazana anime izay mahatonga anao hieritreritra, hahatsapa, na hamela fahatsapana maharitra. Ary ny Death Note dia ohatra ara-dalàna amin'izany
Naruto dia anime iray hafa izay malaza be manelingelina. Mbola bebe kokoa noho ny Death Note (izay toa adala) dia tsy afaka mandeha na aiza na aiza ianao raha tsy misy olona miresaka momba an'i Naruto.
Ampahany amin'ny resaka anime foana izy io, na dia mifantoka amin'ny seho taloha kokoa aza ny olona (fa tsy Boruto).
Ny vanim-potoana volamena farany an'ny anime dia nisy anime mpamono tamin'ny fahitana mazava, ary iray amin'izany i Naruto. Ankahalao izany na tiavo.
Ny lafiny mandrisika sy ny lesona amin'ny fiainana + dia manana anjara toerana lehibe amin'izany.
Mifandraika: Maninona i Naruto no TSY ho lehibe noho ny Dragon Ball Z
4. Kaody Geass
Kaody Geass dia iray amin'ireo Mecha vitsivitsy SHINE nandritra ny taona 2000. Saingy io ihany no Mecha nahatonga azy ho lehibe nandritra ny vanim-potoana volamena farany (2000 - 2006).
Vitan'ny Sunrise Studios, ny Code Geass dia mitovy amin'ny lalao chess, lasa ady tanteraka teo amin'i Japon sy Britannia.
Paikady, tetika, drafitra 10 dingana mialoha, tsy fieritreretana ny fifaninanana… Ary toetra amam-panahy mampiahiahy hatrany amin'ny fitondran-tena sy ny etika. Code Geass dia anime Golden Era henjana.
Andiana goavana io.
Io ilay anime izay nanao izaho toa an'i Mecha aloha.
Mifandraika: Izany no Anton'ny fankahalana be an'i Mecha Anime
Elfen Lied dia anime mahavariana amin'ity lisitra ity satria TSY Shounen, na zavatra mahazatra an'ny anime lehibe indrindra tamin'ny vanim-potoana volamena.
Andian-tantara mahatsiravina izay maka ara-bakiteny ilay teny hoe 'horohoro' raha ny amin'ny:
Ary ny zavatra hafa rehetra mahatonga an'i Elfen Lied ho anime.
Avy amin'ireo anime mahatsiravina rehetra navoaka nandritra ny vanim-potoana volamena, SY ny anime rehetra navoaka tamin'ny karazana horohoro… Elfen Lied mijoro ambonin'izy rehetra noho ny lazany.
Ny hany mampiavaka azy dia ny fampisehoana toa an'i Higurashi (fa namoaka TAORANA amin'ny vanim-potoana volamena an'ny anime).
biby goavam-be no anime 'hafa' mampihoron-koditra ihany no nahatonga azy ho lehibe mandritra io fotoana io miaraka amin'i Elfen Lied. Monster dia nataon'i Madhouse (toy ny Death Note).
Miaraka amin'ny fizarana 70+ mahery izy izay dia intsony noho ny horohoro mahazatra. Saingy namaky ilay tabataba izy io ary nahatonga azy ho lehibe.
Anime malaza (indrindra tamin'izany fotoana izany) mifantoka amin'i Kenzo Tenma, dokotera izay tsy nahy mamonjy ny ain'ny mpamono olona serial. Tsy mahalala zavatra tsara noho izy satria tamin'io fotoana io, ilay zazakely dia nentina tany amin'ny hopitaly toa zazakely mahazatra.
Taty aoriana na dia fantatrao aza fa efa nanelingelina lasa izy, ary mpamono olona mitohy miafina ao anaty alokaloka ary atidoha mamono olona tsirairay toa ny lalao haiady.
Mifandraika: Teny nalaina avy amin'ny Monster
eau de Javel dia anime tsy hay hadinoina nandritra ny vanim-potoana volamena farany. Studio Perriot (studio mitovy amin'ny Naruto) no tompon'andraikitra amin'ny fahombiazany.
Ny mampihomehy dia nolavina i Bleach tamin'ny voalohany satria 'mitovy loatra' amin'i Yu Yu Hakusho. Tonga lavitra be àry i Bleach mba hahatratrarana ny soratana.
Na mpankafy ny sarimihetsika ianao na tsia, mihamatanjaka eo amin'ny sehatry ny sehatra izany.
Tonga dia mahitsy ny tsy fanajana ny tsy miraharaha an'ity anime ity mandritra ny vanim-potoana volamena an'ny anime. Na koa ankehitriny ho toy ny Shounen mahazatra.
8. Lahatra Mijanona Alina
Fate Stay Night, ny VOALOHANY Fate Stay Night navoaka 2006. Tamin'ny voalohany nataon'i Studio Deen, ny anime dia nilatsaka tamina toetry ny vanim-potoana volamena ara-potoana.
Ny anime (ary bebe kokoa noho izany ny franchise) dia nanjary malaza be ka tsy azo odian-tsy hita rehefa miresaka kilasika isika mandritra izany fotoana izany.
Ny fiheverana ny hiady amin'ny hafa noho ny FITIAVANA farany anao dia ampahany amin'ny antso an'ity anime ity.
Raha mbola manavao ny franchise ny fiaran-dalamby Fate dia mijanona eto.
Anime hafa nandritra ny vanim-potoana volamena farany (2000-2006):
Panic Metal feno.
D. Lehilahy volondavenona
Ivelan'ny seho anime ireo nandritra ny 2000-2006, sarotra ny mieritreritra ny anime izay:
Toy ny lehibe koa
Na lehibe kokoa
Noho ny sarimiaina efa nolazaiko.
Tsy dia be ny sarimiaina tafakatra an-tampony nandritra ny vanim-potoana volamena farany, fa kilasika ambanin'ny tany maro ary anime mahafinaritra amin'ny ankapobeny no manodidina.
Tsy izy ireo fotsiny no malaza indrindra na mainstream, izay ny teboka amin'ity lisitra ity.
Tsy noraharahiako ireo seho toa ny One Piece satria nanomboka izy ireo alohan'ny ny vanim-potoana volamena farany. Na dia nandefa aza izy ireo tamin'ny taona 2000 tamin'ny fotoana iray.
Raha tsy nahita aho dia zarao amin'ireo hevitra ireo.
Antony 4 mahatonga ny mpankafy Anime hanafina ny tombotsoany amin'ny olon-kafa
Inona ny Anime tokony hojereko? Ireto misy toro-hevitra 17